Agenda si ay u diyaariso mucaarad guuleysta sanadka 2021 ▷ Waad DHIIBO doontaa! | Sameynta iyo daraasadaha
Waad go’aansatay mucaarad baro. Marka waxaan horay u haysanay fikrad cad oo ku saabsan mustaqbalkeena. Laakiin hadda waxaa yimid qayb kale oo aasaasi ah oo ah in la doorto mid. Waxaan u baahanahay inaan dareemo xirfadaas oo noo sheegaysa laanta aan soo jiidanayno. Tan waxaa u dheer, ka fikir cinwaannada aan hayno, maxaa yeelay sida aan ognahay, waa mid ka mid ah shuruudaha waaweyn.
Mar haddii aan maskaxda ku hayno mucaaradka aan jecel nahay ama nagu dhiirrigeliya, waxaan u baahannahay inaan iibsanno ajandaha. Waan qaban karnaa hadda, markaa hoosta waxaad ka heli doontaa manhajka imtixaanada tartanka ee leh fursadaha shaqo ee ugu badan hadda
Inta badan tartamada la dalbaday
Ajandayaasha Xafiiska Boostada
Ajendayaasha dab damiska
Ajandayaasha ilaalada shacabka
Mucaaradka ilaalada shacabka: Mid ka mid ah tartamada sida aadka ah loo dalbado waa Ciidanka Madaniga ah. Ciidamada amniga ayaa had iyo jeer ka mid ah kuwa aadka loo codsado. Qaar ka mid ah imtixaanada tartanka ee shuruudahooda ugu weyni ay yihiin inay haystaan ​​shahaadada ESO, inay noqdaan 18 sano jir oo aan ka badnayn 40 jir. , cilmu-nafsiga iyo wareysi shaqsiyeed).
Mucaaradka Dabdamiska: Si aad awood ugu yeesho inaad isu soo bandhigto tartamadaan dab damiska waxaad u baahan tahay shahaadada Bachelor ama wax u dhigma, sidoo kale inaad tahay 16 jir. Imtixaanku wuxuu kaloo ka kooban yahay qayb aragtiyeed iyo qayb wax ku ool ah (Xadhig fuulidda, qaadista culeyska, riixitaanka, orodka, dabaasha iyo boodada tooska ah). Cilmi-nafsiga iyo baaritaanka caafimaad waxay dhameystiraan qaybaha ay tahay in laga gudbo. Markaad hesho booskaaga, waxaad qaban doontaa shaqooyin badan oo kaladuwan sida daad-gureynta, xaaladaha degdega ah ama dab damiska.
Mucaaradka SAS (Adeegga Caafimaadka Andalusiyaanka): Halkan waxaan ku lahaan doonnaa jagooyin dhowr ah mid walbana wuxuu yeelan doonaa shuruudihiisa qaabka digriiga. Dhamaantood waxaan ku muujineynaa maamulka, amar bixinta, farsamayaqaanada farmashiyaha ama jimicsiga jirka, iyo kuwo kale. Imtixaanka, wuxuu ka koobnaan doonaa qayb aragtiyeed iyo koorso wax ku ool ah, iyada oo aan la iloobin wajiga tartanka, halkaas oo mudnaanta la helay lagu dari doono.
Mucaaradka dhaji: Shuruudo ahaan, waxaad u baahan doontaa shahaadada ESO ama wax u dhigma oo durba waxaad gaadhay 18 sano. Imtixaanka, waxaad u baahan doontaa inaad ka gudubto imtixaan la yiraahdo mid guud iyo mid gaar ah, halkaas oo cilmu-nafsiga ay sidoo kale ka soo muuqdaan. Tartamadaas gudahood, waxaan sidoo kale ka heli doonaa jagooyin kala duwan (fulin, rasmi, kala-saarid, kalkaaliyeyaal ama kaaliyeyaal). Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin Bangi Shaqo oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo shaqooyin kala duwan inta aan sugeyno booskeenna.
Cadaalada ayaa diidan: Mucaaradka dhexdiisa ee Cadaalada waxaan kaheleynaa sadex hay'ad oo sifiican u kala duwan. Maaraynta Nidaamka loo baahan yahay diblooma ama shahaadada jaamacadeed, markaa waxaan haynaa Nidaamka Nidaamka Nidaamka halkaasoo looga baahan yahay shahaadada Bachelor. Ugu dambeyntiina, meydka Gargaarka Garsoor ee isaga loo sameeyay ayaa ansax ah heerka ESO ama wax la mid ah. Marka mucaaradkaaga la oggolaado, waxaad awoodi doontaa inaad gasho dallacaadda gudaha. Hawlaha la qabanayo xoogaa way ka duwan yihiin, laakiin dhammaantood waxaa laga fuliyaa inta u dhexeysa xeer-ilaaliyeyaasha iyo xafiisyada garsoorka.
Faa’iidooyinka aad ku leedahay shaqaale dowladeed
Maamulka dowladu wuxuu bixiyaa shaqooyin, kuwaas oo dad badani u diyaar garoobaan bilo ama sannado. Dadaal weyn oo mudan, tan iyo markii mucaaradku dhaafo, waxaan heli doonnaa faa iidooyin badan oo ah noqoshada shaqaalaha dowladda.
Amniga boos joogto ah: Shaqadu waa qayb nolosheena muhiim u ah. Waad ku mahadsan tahay isaga, waxaan awoodi doonnaa inaan helno mushahar noo ogolaanaya inaan kula noolaano raaxada qaarkood. Marka noqoshada shaqaale dowladeed waxay muujineysaa amnigaas. Bil kasta waxaan heli doonnaa mushaharkeenna, oo lagu daray labo lacagood oo dheeri ah sannad kasta. Aaggan, cayrinta shaqadu maahan kuwo soo noqnoqda, maxaa yeelay waad sii wadi kartaa shaqada illaa aad ka gaarto da'da hawlgabnimada.
Fasax aad u qalmay: Dhamaan shaqooyinka waa inay sidoo kale ku jiraan xilliga fasaxa. Waa run oo marwalba sidaas ma aha kiiska, waxayna kuxirantahay nooca shaqada. Intaa waxaa dheer, xaalado badan maalmaha nasashada si weyn ayaa loo dhimay. Marka faa iidada kale ee ah inaad ahaato shaqaale dowladeed waxay leedahay maalmo fasaxyo badan.
Jadwalka: Waa run in ay tahay inaad ixtiraamto jadwallo taxane ah, labadaba soo galid iyo bixidba. Laakiin markay xaaladdu sidan tahay, inta badan maahan inaad sii dheeraato intii aad ahayd. In kasta oo shaqooyin kale oo badan aan qabanno nasiibkii naloo sheegay in aan dhammeyno nooc kale oo waraaqo ah. Intaa waxaa dheer, inta badan dukaamada, waxaad heli doontaa nasasho inaad ku qaxweyso.
Hagaajinta xuquuqda shaqaalaha: Shaki la'aan, xuquuqda shaqaaluhu waxay leedahay isbeddel weyn oo u dhexeeya shaqaalaha rayidka ah. Arimaha sida howlgabnimada iyo waliba tabarucaada, iwm, had iyo jeer waa qodobo go'an oo la ixtiraamo.
Tartanka wareejinta: Waa run inay sidoo kale faa iido weyn u tahay inta badan jagooyinka la bixiyay. Taasi waa, waxaad yeelan doontaa dhaqdhaqaaqa juqraafi, haddii aad rabto. Inkasta oo aysan noqon doonin far, laakiin loo marayo marxaladda tartanka. Waxaa laga yaabaa in macallimiinta ay waxoogaa ka dhib yar tahay, laakiin weli waxaa loo qaadan karaa inay tahay faa'iido wanaagsan in la tixgeliyo
Noocyada mucaaradka ama Shaqaalaha dawladda waxaa jira afar kaliya, iyadoo kuxiran shuruudaha, shaqada lafteeda iyo jagooyinka.
Sarkaalka shaqada: Badanaa waxaan si fudud ugu naqaanaa inuu yahay shaqaale dowladeed. Waa qofka ku xidhan Maamulka Dawladda. Taasi waa, waa mowqif go'an ka dib markii uu gudbo mucaarad oo uu boos helo. Hawlaha noocan ah gudahood, waxaan kaheleynaa kala soocid, sida ku xusan cinwaannada looga baahnaa.
Kooxda AKooxda koowaad sidoo kale waxaa loo qaybin karaa A1 iyo A2. Labadaba mid iyo tan kale, waxaad ubaahantahay shahaado jaamacadeed si aad awood ugu yeelato inaad codsato boosaskan.
Kooxda B: Si aad uhesho mucaaradka kooxda B, waxaad ubaahantahay cinwaanka Farsamo yaqaan Sare.
Kooxda C: Halkan waxaan sidoo kale ka heli doonnaa waxa loogu yeero C1. Iyaga dhexdooda shahaadada Bachelor-ka ayaa looga baahan yahay, halka C2-ka, shahaadada koowaad ee shahaadada ESO looga baahan yahay.
Ku simaha saraakiishaIn kasta oo aan diyaariyey mucaaradka, haddana wuu ka duwan yahay kuwii hore maxaa yeelay shaqooyinkeeda iyagu sidii hore uma deggan yihiin. Dabcan, shaqooyinka shaqada ay tahay inay qabtaan waxay la mid noqon doonaan kuwa saraakiisha xirfadaha. Laakiin layliyaashu waxay soo muuqdaan markay jiraan shaqo xad-dhaaf ah ama ay jiraan shaqooyin banaan oo qaarkood ay tahay in la buuxiyo ama ay tahay bedel.
Shaqaalaha shaqaalaha: Waxay leeyihiin qandaraas ka yimaada Maamulka Dadweynaha. Qandaraaska la sheegay wuxuu noqon karaa mid aan la cayimin, joogto ah ama ku meel gaar ah.
Shaqaalaha ku meelgaarka ah: Xaaladdan oo kale waxaynu ka hadlaynaa shaqo inta badan loogu talo galay la-talin iyo sida magacu ka muuqdo, waa ku-meel-gaadh.
Waxaan rabaa inaan barto mucaarad, sida loo bilaabo?
Waa kuwan taxane taxane ah oo lagu bilaabayo barashada mucaaradka oo aanad u dhiman isku dayga:
Had iyo jeer waa inaad xoogaa dejiso saacado waxbarasho oo go'an. Sababtoo ah jadwalka joogtada ahi had iyo jeer waa aasaaska isu dheelitirka iyo dhiirrigelinta jirkeena.
Bilow inaad waxyar barato. Xusuusnow in mucaaradku waqti qaataan waxaana wanaagsan in si fudud loo qaato hadaan dooneyno natiijo wanaagsan. Dabcan, xaaladdan, qof walba wuu dejin karaa hadafyadiisa. Waxaa lagugula talinayaa inaad kubilaawdo waqti yar, daqiiqado yar laakiin sifiican diirada u saaran. Isku dheelitirnaanta ayaa marwalba fure u ah barashada wanaagsan.
Had iyo jeer xusuusnow taada dhiirigelinta. Haddii aad halkan timid, waxaa loo malaynayaa inay tahay inaad ka fikirtay, waxaad ka milicsatay waxyaabihii wanaagsanaa ee ahaa inaad ka gudubto mucaaradka ayaa kaaga tagi doona. Markaa markaadan ka helin, markasta xusuusnow dhiirigelinta oo arag himilada.
Ha ka welwelin haddii mowduuc uusan kula jirin sidii aad filaysay. Sababtoo ah haddii aad diirada saarto kaliya mowduucan, waqti badan ayaad lumineysaa oo waad guuleysan doontaa. Ma aha in arrimaha oo dhami ay noqdaan kuwo aad u adag, ha dalban wax badan oo wax xal u leh.
Mucaaradku waa sidii oo ay shaqo ahayd. Waa run oo marka hore looma xisaabiyo, laakiin waa inaan sidaa u qaadannaa. Ha ku jahwareerin isbedelka ugu horeeya, habeysan hana dheregsan.
Waxaa jira dad bilaaba waxbarasho qiyaastii saddex saacadood maalintii inta lagu jiro bisha koowaad. Laakiin sidaan soo sheegnay, waxaa jiri kara nasasho, laakiin had iyo jeer xoog saaris badan. Kadib, bisha xigta, waad kordhin kartaa maalintaada waxbarasho.
Had iyo jeer, ma xumeyso in wax la qabto nooca imtixaanka jeesjeeska ah. Sidan ayaad xiriir gaar ah kula yeelan doontaa waxaad heli doontid marka maalinta weyni timaaddo, oo aqoontaada ayaad imtixaanka ku gelin doontaa.
Xusuusnow inay kugula talineyso inaad marka hore wax aqriso, ka dibna hoosta ka xariiq waxa ugu muhiimsan oo aad sameyso soo koobid si aad u hagaajiso fikradaha.
Ma adag tahay in laga gudbo mucaarad?
Ma aha su’aal fudud oo laga jawaabi karo. In kabadan waxkasta maxaa yeelay dhibaatada gudaheeda sidoo kale waxaa jira qodobo kaladuwan. Mid ka mid ah waa nooca mucaaradka ee aan u soo bandhigno nafteena, iyo sidoo kale qiyaasta ay ku leeyihiin Kooxaha A, B ama C. Dhinaca kale, waxaa jiri doona waqti aan u hibeyno iyada, maadaama ay u baahan tahay adkeysi badan iyo shaqo, iyo sidoo kale abaabul.
Waxaas oo dhan, waa in maanka lagu hayaa in dad badani sannado ku qaataan ka hor intaan la ansixin. Laakiin waa wax walba oo ku saabsan quusashada, diiradda saarida yoolka iyo u socoshada. Xitaa talaabooyin yaryar, laakiin marwalba waad awoodaa. Waxaan helnaa markhaatiyo nooc walba leh, halka qaarkood ay ku soo koobayaan inay dhib badnaayeen, halka kuwo kalena aysan u helin sidii lagu sharraxay. Marka sidaan dhahno, waxay ku xirnaan doontaa qofka, qaababka shaqada iyo go'aan qaadashadiisa.
Immisa lacag ah ayaa laga qaadaa
El mushaarka sarkaal Waxaa go'aamiya kooxda aad diidday. Laakiin intaa waxaa sii dheer, qodobo kale ayaa lagu daray sida halka loo socdo ama waqtiga dheer ee booska. Laakiin qiyaas ahaan mushaharku waa kuwa soo socda:
Kooxda A1: Mushaharkaaga bil kasta wuxuu ka badan yahay 2.800 euro. Kooxdan waxaa ku jira kormeerayaasha shaqada, amniga bulshada, maaliyadda ama hay'adaha sare ee Maamulka Gobolka.
Kooxda A2: Xaaladdan oo kale mushaharku wuxuu hoos ugu dhacayaa 2.200 euro bishii iyo laba lacag bixin oo dheeri ah. Kooxdan, waxaan ka heli karnaa saraakiil farsamo xisaabinta, maaliyadda ama maaraynta nidaamyada, iyo sidoo kale teknolojiyada macluumaadka.
Kooxda B: Haddii aad haysato aqoon sare oo Farsamo, waxaad awood u yeelan doontaa inaad gasho kooxdan. Mushaharkiisa, waxay noqon doontaa qiyaastii 1.800 euro.
Kooxda C1: Hay'adda maamulka badanaa waxay ku taal kooxdan. Si aad isu soo bandhigto, waxaad u baahan doontaa shahaadada Bachelor-ka. Mushaharku wuxuu u dhexeeyaa 1.600 euro.
Kooxda C2: Halkan waxaan ku la kulmi doonnaa hay'adda caawinta, taas oo shuruud aasaasi ah u baahan doonta cinwaanka ESO. Waxay ka qaadi doonaan qiyaastii 1200 euro.
Kooxda E: Shaqaalaha yar yar waxay heli doonaan qiyaas ahaan mushahar dhan 1000 euro.
Maxaa dhacaya haddii aan ku dhaco imtixaanka mucaaradka?
Waa run in ka dib waqtiga oo dhan, dadaalka, markay arkeen in la hakiyay waa arrin jahawareer leh. Marka waa inaan isku daynaa inaan aqbalno waxa dhacay, xitaa haddii aysan sahlaneyn. Maalmaha soo socda, waxaa lagugula talinayaa inaad nasato oo aad raaxeysato. Waa daqiiqad aan nafteena siino waqti milicsiga oo aan iska ilowno wax walba intii suurtagal ah.
Waa inaad fiirisaa dhinaca togan. Sababtoo ah waxaas oo dhan waxay ku saabsan yihiin barashada iyo waqti kasta oo aan ku dhowaan doonno himiladeenna. Taas oo kordhinaysa khibrad dheeri ah marka xigta ee aan soo bandhigno. Si kastaba ha noqotee, laalo imtixaanka mucaaradka, Ma aha dhamaadka. Waa hab lagu ogaan karo khaladaadka iyo hagaajinta farsamooyinka lagu qaado imtixaanka soo socda si kafiican.